Sida loo ilaaliyo arimahaaga gaarka ah internetka | Laga soo bilaabo Linux
Fadeexadda Barnaamijka PRISM ee Hay'adda Amniga Qaranka (NSA), oo ay soo bandhigtay muujinta Edward Snowden, ayaa arrinta asturnaanta ku qortay internetka (in kasta oo aysan ku koobnayn dhexdeeda, sidoo kale meelaha kale sida fariimaha qoraalka, iwm) .)
1 Fikradaha milicsiga
2 Waxyaabaha kale ee lagu daryeelayo asturnaantaada (inyar)
In kasta oo qaybo ka mid ah adduunka, xakamaynta internetka ay si toos ah uga dhacdo faragelinta dawlad-gaar ahaan waddamada leh eex-xumo diktaatooriyad leh-kuwa kalena in fara-gelintu ay sii jirto laakiin si aad u dhib badan. Wadamada raasumaalka, gaar ahaan kuwa kujira "xarunta", faragelinta dowladu waxay si dhaw ulaxiriirtaa koritaanka cirbixiyeenada ee monopolies-ka tiknoolajiyadda, oo saldhigoodu yahay shabakadda. Waxaan si cad uga fikirayaa Mareykanka, halkaasoo Facebook, Google, Microsoft ama Twitter ay ka urursanayaan macluumaad aad iyo aad u badan oo adeegsadayaasha ah waana taas, marka la eego, macluumaadka ay dowladdu u isticmaasho dartiis -markaa badanaa loo adeegsado sameynta musiibooyinka- Amniga qaranka ". Fahamka xiriirka ka dhexeeya gobolka iyo suuqa wuxuu ku nool yahay jaahilnimo buuxda oo aan la fahmin dhibaatada dhammaan kakanaanta.
In kasta oo Internetku yahay shabakad, sidaas darteedna wuxuu ku saleysan yahay qaab-dhismeed aan kala-sarrayn lahayn, haddana inbadan iyo ka badanba waxaan ku arkeynaa inay bartamaheeda ku jirto gacmo yar. Si kale haddii loo dhigo, inbadan iyo in yar oo shirkado ah ayaa gacanta ku haya dhammaan macluumaadka ku jira shabakadda. Waxaa la yaab leh, tan waxaa lagu sameeyay marar badan ogolaanshaha isticmaaleyaasha kuwaas oo ku habboon ama dariiqa ah "lahaansho" ay bixiyeen xogtooda ama, si toos ah, ay u sameeyeen iyagoon ka warqabin. Si kale haddii loo dhigo, maareynta websaydhku waa mas'uuliyadda, in badan oo ka mid ah, hindisaha gaarka loo leeyahay. Waa shirkadaha ku ganacsada macluumaadkaas, iyagoo sida muuqata ku bixinaya waxtarro badan oo bilaash ah oo innaga, kuwa isticmaala, u rogayna sheyga iibka ah. Dalalka aysan taasi ka dhicin, hindisaha gaarka loo leeyahay waxaa lagu beddelay hindise dowladeed (Shiinaha, Masar, Cuba, iwm). Taasi waa sababta aan u iri in labadan qorshe aysan isbarbar dhigi karin, saxna ahayn in la cambaareeyo nooc ka mid ah faragelinta oo aan iska indhatirno tan kale: "Masar way xun tahay, Google waa wanaagsan tahay" (ama dhinaca kale).
Dhanka kale, aniga waxay ila tahay aniga mid aad muhiim u ah in la xasuusto in Gobolladu aysan ahayn "kubbadaha bowling", labbiska, isku midka iyo xirnaanshaha Hase yeeshe, taa waa halka lagu muujiyo baahiyo badan oo bulsheed, xitaa is burinaya midba midka kale. Tani waxay ka dhigan tahay in Dawladuhu aysan ahayn "shirkado yar yar" oo shirkado ah, laakiin inta badan waxay macnaheedu noqon karaan xaddidaadda danahooda. Tan waxaa lagu arkaa guud ahaan guddiga. Kaliya haddii aan ka fikirno Gobolka sidan oo kale waxay fureysaa suurtagalnimada la dagaallanka sharciyada ilaaliya isticmaalayaasha si aad u ballaaran.
Mid ka mid ah waxyaabaha sida aadka ah u adkeeya sharciyeynta Internetka ayaa ah in baaxadda dhuleed ee madax-bannaanida Gobolladu ay xaddideyso aaggooda waxqabadka, oo aan u dhigmin baaxadda Internetka ama tan shirkadaha (oo aan joojinaynin) waxay leeyihiin saldhig xuduudeed, laakiin baaxad si baaxad leh u dhaafaysa xadka xuduudaha).
Intaas waxaa sii dheer, waa in la xusuusnaado in Dowladaha kala duwan aysan isku awood ama isku mas'uul ku ahayn qorshaha caalamiga ah. Si la mid ah sida ka dhacda meelaha kale, Gobolka Waqooyiga Ameerika la mid ma aha Gobolka Braziil, tusaale ahaan. Fikradaha "xarunta" iyo "periphery" ayaa kaa caawin kara inaad fahanto waxa aan sheegayo.
Ugu dambeyntiina, waxaan u arkaa inay tahay mid xiiso leh inaan ka doodo oo aan dib u milicsado waxyaabaha soo socda: anigoo ka imanaya xaalad asal ah "nidaam la'aan" internetka oo aan ku xisaabtamayo mar kasta oo aan u sii socono xog-isweydaarsiga macluumaadka, waxaan isweydiiyaa: miyay tahay in aan u doodno in aan ku laabanno "xakamayn la'aanta" internetka - wax la mid ah Rousseauian State of Nature - ama ma lagama maarmaan baa in loo doodo "qawaaniin" mudnaanta u leh dadka isticmaala (wax la mid ah qawaaniinta ilaalinaya muwaaddinka iyo xuquuqda dimoqraadiyadda) ? Si daacadnimo ah, ma garanayo ilaa iyo inta u doodaya ku noqoshada nidaamka "fowdada" iyada oo aan lahayn nooc kasta oo qawaaniintu noqon karto utopia ama, ka sii xun, waxay u adeegi kartaa ciyaarta monopoli-yada waaweyn. Malaha taasi waa sababta aan u arki karno Google oo difaacaya "xakamayn la'aanta" (gobolka) internetka. WTF! Waa inaanan ilaawin xaqiiqadan weyn ee wadamada qaar, sida tayda, ay ku barteen gaajada iyo saboolnimada: xakamaynta la'aanta gobolka sidoo kale waa nooc ka mid ah siyaasada gobolka, waxaa loogu yeeraa neoliberalism.
Ka soo qaad, markaa, in jawaabta ay tahay in la isku dayo in laga wada hadlo dejinta Internetka. Markay sidaa tahay, ma jirto meel looga baxsado: SAHALANNAAN waa inuu ahaadaa mid caalami ah dabeecadda Internetka dartiis, iyo in "qawaaniinta caalamiga ah" ay kaliya ku heshiin karaan Gobollada (taas oo suuragal noqonaysa maadaama aysan Gobolladu ahayn "kubbadaha Bowling") ).) Tusaale wuxuu noqon karaa hindisaha Midowga Yurub ee lagu xakamaynayo Google qaaraddii hore ama sharciyada «dhexdhexaadnimo saafi ah«, Sidii tii Chile xayiraad saartay.
Tan macnaheedu maaha in nooc kasta oo faragelin dawladeed ah oo ku saabsan internetka (ama arrimo kale) ay daruuri tahay "wanaagsan" ama "aan fiicnayn", laakiin macnaheedu maaha inay si xun u xumaato "ama" aan loo baahnayn. Sida aan u heli karno dadaallada la ammaani karo, ayaa sidoo kale jira ACTA iyo dadaallo kale oo badan oo ay wadeen dad badan oo caalami ah si ay u soo rogaan aragtidooda ku saabsan sida Internetku u noqon lahaa. Is burintaani waa mid macquul ah maxaa yeelay, sidaan horay u sheegnay, suuragal ma ahan in Gobolka loo arko wax ama aalad gacanta qof ku jirta, laakiin loo arko geedi socod is burinaya, oo dildilaac leh. Dadaalkeennu waa in lagu jiheeyaa, sida ay ila tahay, in lagu qasbo khilaafkan; Dadaal aan haba yaraatee ahayn wax fudud, gaar ahaan marka dhinaca kale ay jiraan monopolyo waaweyn, oo faa iidooyinkoodu aad uga badan yihiin waxsoosaarka dalal dhowr ah oo la isku daray iyo in marar badan xitaa ay leeyihiin taageerada gobollada ay ku yaalliin.
Su’aasha adag ee wali kujirta dhuunta ayaa ah: hadii qawaaniintu ay lama huraan tahay (in la xadido awooda kaligood-taliyayaasha ama dowladaha awooda haya, tusaale ahaan) iyo sida kaliya ee lagu gaari karo qawaaniintaas waa iyada oo loo marayo sharciyada, iskaashiga iyo heshiisyada caalamiga ah, noocee faragalinta miyay tahay in waddamadeennu difaacaan (Waxaan ka hadlayaa, tusaale ahaan, Latin Amerika ama, si ballaadhan, "duruufaha")? Iyo, marka la barbar dhigo, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la caddeeyo jawaabta soo socota: noocee ah qawaaniin ay dawladaha waddamadu doonayaan inay ka dalbadaan dhulalkooda oo qayb weyn oo ka mid ah macluumaadka internetka lagu kaydiyo iyo halka shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda degan yahay Ama sharci noocee ah ayay dawladahaas kaligood-talisnimada ku dhisan ay raadinayaan? Ugu dambeyntiina: waa maxay aagga ugu wanaagsan ee laga bixin karo dooddan: labada dhinac, kan gobolka, kan adduunka?
Nooca "qawaaniinta" aan ka hadlayo ma aha wax kale oo aan ahayn isku dayga lagu hubinayo internetka qof walba gaadhayo, iyada oo aan xaddidnayn. Maahan in la dhiso "boolis caalami ah", oo waliba aan macquul aheyn oo lagu qoslo. Taasi waa in la yiraahdo, aniga ujeeddadu ma ahan sharci diidmo, sharciyeyn booliis, laakiin waa qawaaniin togan, si loo difaaco loona xaqiijiyo xuquuqda muwaaddinka iyo dimoqraadiyadda, xaaladdan oo ah adeegsadayaasha internetka. Ma aaminsani inay taasi suurtagal noqon karto - wayna ka yaraan doontaa oo ka sii yaraan doontaa - iyada oo aan la helin wax faragelin dawladeed ah iyo wadashaqayn: tusaale ahaan, sidee muwaadin reer Brazil ah u difaaci karaa asturnaantooda haddii xogtooda lagu kaydiyo dal kale? Dimuqraadiyadda, sida kaliya ee aad xuquuqdaada uga difaaci karto danaha mulkiilayaasha iyo kuwa dowladda hadda jirta waa iyada oo loo marayo sharciyada (kuwa aan nasiibka u helin inay ku noolaadaan nidaam dimoqraadi ah, waa iyada oo aan la dhihin waxay leeyihiin way ka adag yihiin), laakiin waxay leeyihiin xuduudo dhuleed oo la mid ah madaxbanaanida Dowladaha, waana sababta ay iskaashiga caalamiga muhiim u tahay.
Waxaan qirayaa in booskeygu uusan sahlaneyn, maadaama dusha sare ay umuuqato mid aad ugufiican in la difaaco "sharciyeyn la'aanta" iyo ku laabashada Rousseauian State of Nature taas oo aan dhamaanteen ku dhex marno gacanta duudka ee gacanta. Kaftanka ayaa ah in "qawaaniinta" cabsida leh ay horeyba u jirtay oo aan kaliya lagu fulinaynin awoodaha Dowladaha (guud ahaan kuwa "xarunta" iyo taas oo "dariiqyada" ay tahay inay si hoose u aqbasho), laakiin sidoo kale iyada oo loo marayo ganacsiyada gaarka loo leeyahay. Raadinta iyo suuqgeynta macluumaadkayagu waa caddaynta ugu fiican ee tan: waxaan noqonnay badeecad iib ah. Sikastaba ... doodu way furantahay. Hore ayaan u tuuray dhagaxii ugu horeeyay ...
Waxyaabaha kale ee lagu daryeelayo asturnaantaada (inyar)
Marka la soo koobo, fadeexadii PRISM waxay gacan ka gaysatay in arrimahaas miiska la soo saaro oo waxay keentay in dad badani go'aansadaan in ay ku sameeyaan nooc ka mid ah "isticmaalka mas'uul ka ah" internetka. Isaga maalin kale Waxaan ka qayb galay shir ay Werner koch, Madaxa GnuPG, oo sheegay in "ay u badan tahay in midkeenna uusan u adkeysan karin weerar la bartilmaameedsaday, laakiin illaa iyo inta aan ku dhex jirno 'tirada dadka' waxaa jira waxyaabo badan oo aan sameyn karno si aan uga fogaanno daba-galka." Macquul inay sax tahay Ilaalinta oo dhameystiran waa wax aan macquul aheyn, laakiin waxaa jira dhowr waxyaabood oo aan sameyn karno "maanta iyo hadda" si loo yareeyo baafinta monopoli-yada waaweyn iyo dowladaha qaar.
Waa kuwan qaar ka mid ah 'beddelka' beddelka nidaamyada hawlgalka, codsiyada iyo xitaa adeegyada internetka ee Koch uu ku xusay hadalkiisa oo laga heli karo 'verbatim' bogga internetka https://prism-break.org/#es.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Sida loo ilaaliyo arimahaaga gaarka ah internetka
Wax ku biirinta wanaagsan.
Si ka duwan. Waad ku mahadsantahay joojinta iyo ka tagida fariintaada.
Wax ku darsasho weyn
Noblogs? Autismiga? Retro vade
Runtii waan joogaa adeeggaas. Waxtar ma lahayn in la abuuro balooggeyga lamula.pe, mar dambe ma oggola faallooyinka.
Waxay saareen Arch Linux xagga sare ee nidaamyada hawlgalka lagu taliyay. * Waan ka helay *
Waa mid ka mid ah kuwa ugu yar ee bilaashka ah, sidoo kale kaydinta xogta waxay muujineysaa dadaal dheeri ah maxaa yeelay dhowr guji kuma filna, tusaale ahaan waa inaad si gooni ah oo gacan ah ugu qaabeysaa AppArmor ama SeLinux.
Aragti ahaanna waxay leedahay cilado badan oo cusub.
Dhanka kale, waxay ku siineysaa xorriyad in wax waliba ay yihiin sida aad rabto, waxaan u maleynayaa inay taasi qiimo badan leedahay,
Waxaan marwalba u arki doonaa Arch sida KISS + RTFM distro (marka waa inaad ka warqabtaa golayaasha iyo wiki-koodaba in kabadan waxkasta oo lagu cusbooneysiiyo ama lagu sameeyo howsha aan caadiga ahayn)
Waxaan ka door bidaa Slackware-ka Arch, maadaama Slackware uu yahay KISS oo uusan lahayn dhibaatooyin badan sida Arch.
Ka 2aad. meeshu waa Debian. #Badbaado la'aan
Wax ku biirinta aadka u wanaagsan tani waxay u qalantaa inay noqoto kuwa ugu cadcad lana wadaag.
Marka ay timaado basaasnimada ay NSA ku laheyd prism-ka aduunka oo dhan, talaabooyinka la qaadayo ma ahan kuwo wax ku ool ah hadii aysan ku qorneyn oo laga saxiixin ISSUER ilaa RECEIVER maadaama uu prism si toos ah u faragalinayo giraanyada indhaha.
Waxay kugula talinayaan in loo adeegsado Tor cabir ahaan asturnaanta marka la ogyahay in dowlad awood u leh inay hesho qof shabakadda Tor ay aad u fudud tahay maaddaama noodhadhka sameeya shabakadda Tor ay hayaan diiwaanada IP-ga iyo codsiyada DNS oo aan la tirin FBI-da ayaa heysata adeegeyaal fara badan oo firfircoon si ay ugaarsadaan kuwa ka ganacsada dambiyada iyo tiro aan dhamaad lahayn oo dambiilayaal ah iyagoo adeegsanaya shabakadan.
Way fududahay hadaad rabto inaad lahaato asturnaan, ha isticmaalin internetka, mobilada oo si toos ah ugu noolow buur aysan teknolojiyad ka jirin.
Ku jawaab Tor
Ugudambeyntii si aad u muujiso tan, mudo kadib way joogsan doontaa u adeegida, hay'ada NSA waxay arki doonaan tabarucaada aad bixisay, hee waxayna dhihi doonaan waxaan ubaahanahay inaan ku basaasno barnaamijyadan, waxaan soo jeedinayaa in loo sameeyo satalayt bilaash ah idaacadaha oo bilaash ah, riyo aan macquul aheyn;. (
Waa wax weyn,
Mid ka mid ah qoraalladii ugu dhammaystirka badnaa ee aan abid akhriyo. Runta raaxada siisa. Waxa kaliya ee aan jeclaan lahaa ... hahaha sidee caajis! Waxaan jeclaan lahaa inaad faahfaahin dheeraad ah ka bixiso codsiyada, iwm. taas ayaa lagula talinayaa….
Waa wax cajiiba sida ay waxyaabo badan u noqdeen kuwa la qaatay ...
boostada wanaagsan: D, wax kasta oo hadda socda, Linux waxay gaari doontaa dad badan
Aad baad ugu mahadsantahay qoraalka, aad iyo aad u dhameystiran aadna ufiican waxaan horeyba u isticmaalaa dns iyo kordhinta goynta Firefox
Ku jawaab Viejito
Wax ku biiris aad u fiican, ma aanan ogeyn jiritaanka codsiyada bilaashka ah ee la xoojiyay
Ka taxaddar Bitcoins, taas oo, marka lagu daro ku tiirsanaanta badan ee mala-awaalka, waxay haysaa diiwaanka dhammaan wareejinta lala sameeyay iyaga. Sidoo kale, waxaa jira meelo aad u yar oo iyaga aqbala.
Jawaab León Ponce
Kaliya xiisaha darteed, maxaa xogtu ugu badbaadi weyday wordpress? Waxaan u maleynayaa inay tahay sababtoo ah adeegeyaashooda ayaa ku sugan Mareykanka ama maahan?
Ku saabsan isbeddelada cusub, duubista aan dhammaadka lahayn iyo ciidaha